Gabar soomaali ah oo la gudoonsiiyay bilad-sharaf kadib markii ay macalinkeeda ka badbaadisay weerar lagu dili rabay - NorSom News
Gabar soomaali ah oo la gudoonsiiyay bilad-sharaf kadib markii ay macalinkeeda ka badbaadisay weerar lagu dili rabay
Safiirka Mareykanka u fadhiyo Norwey iyo Farhiyo Ahmed. Foto: Trond Lepperød/Nettavisen
Farhiya Ahmed oo ah gabar soomaaliyeed oo dhalinyaro ah ayaa shalay la gudoonsiiyay bilad-sharaf ay mutaysatay kadib markii ay macalinkeeda iskuulka ka badbaadisay weerar uu kusoo qaaday ardey dhigta fasal kale sanadkii 2014. waxaana biladan iyo shahaado sharaf kale gudoonsiiyay safiirka mareykanka u fadhiya Norwey Samuel Heins, isaga oo sheegay inay qabatay shaqo geesinimo leh, ayna badbaadisay nolosha macalinkeeda oo qarka uu saarnaa inay nafta looga jaro ceejis.
Farhiya ayaa sheegtay inay ayada iyo labo gabdhood oo ay saaxiibo yihiin arkeen macalinka oo dhuunta lagu dhaganyahay, wajigiisuna uu noqday guduud. Waxaan ku fakaray hadii aanan wax sameyn in ay naftu ka bixi doonto, sida adag ee dhuunta loo hayo darteed. Kadibna waxay qaadatay iskoobe/xaajin kuna tuurtay, isla markaana ku qaylisay wiilkii macalinka dhuunta hayay. Taas oo ugu danbeyn keentay in wiilku uu ka fuqo macalinka. Kadib intaas ayay Farhiyo iyo labadii gabdhood ee kale ay ku guulaysteen inay wiilkan iyo kuwo kale oo la socday ay banaanka uga saaraan qolkii macalinka uu ku jiray.
Macalinka la badbaadiyay oo 43 jir ah ayaa sheegay inuu wali sii noolyahay uu uga mahadnaqayo Farhiyo oo badbaadisay, la aanteedna uu ahaan lahaa marxuum geeriyooday. Macalinkan ayaa ku jiro sykemelding, isaga oo rajeynayo inuu dhawaan dib u bilaabo shaqadiisii macalinimo. Wiilka macalinka dhibta u gaystay ayaa lagu xukumay labo bilood oo xarig ah.
Previous articlePolitidirektoratet oo raali galin bixiyay dib u eegisna ku sameyn doona arinta (ukjent)
Next articleAyaan Yaasiin: Looyarkii aan qabanay iyo booliskii markii ay wadahadal yeesheen ayay isku af garteen in arinta dib loogu noqdo